Dhugaa Abbaan Himatu Caalaa Ragaan Hin Jiru! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhugaa Abbaan Himatu Caalaa Ragaan Hin Jiru!
Damee Boruu: Waxabajjii 18, 2019
Moment of surrendering to OPDO (L to R: Biyan Asoba, Lencho Leta, Dima Negewo and Lencho Bati – leaders of ODF). Note: these hand-crossings are different from Athlete Fayisa Lelisa’s, who was protesting against the repressive Ethiopian regime at Olympic game. The ODF leaders are giving in or surrendering. How history remembers these guys?
Obbo Leencoo Lataa fi Dr. Dimaa Nogoo ijaarsa ABO keessatti jalqabaa kaasanii namoota bakka olaanaa qabaachaa akka turan namni hedduun ni beeka. Hooggantoonni ijaarsa kana akka hin malleetti irra guddaan isaanii wareegamanii jiru. Gagagma guddaa gahaa tureef keessaatuu Obbo Leencoon akka harka keessaa qabu ragaa baayyee dhiyeessuun ni danda’ama. Yaroo kana itti ragaa sana barbaacha deemuun qabsoo itti jirru dagachuu taha.
Akka ijaarsi ABO hin guddannee mataa irra taa’anii bara dheeraaf diigaa as gahan. Gaafa dhaabni ABO aboomii isaan jalaa bahee guddachuu eegalu of ijaaranii kaampi qabsoo bilisummaa Oromoo diiguu fi dadhabsiisuu hojii godhatanii itti fufan. Afaanfjii adda adda haa uuman malee qabsoo bilisumaa uummata Oromoo dhaabuu hin dandeenye.
Qabsawwan hedduun bara dheeraa kana keessatti ifatti dura dhaabbachaa turan. Haa tau malee kittillayyootaa fi dabbalootaa horatanii waan qabaniif namoota yaada isaanii duraa dhaabbatu hundaa irratti olola oofuu fi maqaa xurreessuun amma har’a jiratan. Har’a garuu isaanitu eenyummaa isaanii gadi bahee afaan isaaniin himataa jira. Utuu isaan yakka uummata Oromoo irratti hojjechaa jiran himatanii warri isaan jala deemuu fi isaan faarsuu harroota Oromoo yoo tahan malee ilmaan Oromoo tahuu hin danda’an.
Jidduu kana gaaffii fi deebii Gaazixeesaa Yihun Engidaa fi Obbo Leencoo Lataa OBS irratti godhan namni dhageenye yoo jiraate dura dhageefachuun hin badu. Mee waan Obbo Leencoon jedhuuf waan tahaa jiru wal bukkee qabnee haa ilaallu. Obboo Leencoon mana cufatanii MM Kononeel Abiyi akka gorsaa jiran ifatti himate. MM Kononeel Abiyi gaaffii ABN(NaMa) wal gahii Walloo irrattii aangoo Oromootaa hiraa jirta jedhanii yaroo mudan kakatee dhugaa jiru baase. An Oromoof waan tokko godhe hin beeku.Dhiba keessa harka tokkoo gadi illee yoon Oromoof oogee jiraadhee hojii koo kana amma nan gadhiisa. Garuu aangoo hedduu isniifan kennaa jira jedhee wakkachuu isaa midiyaa hunda irraa dhaga’uu dandeessu.
Mootummaan Kononeel Abiyi ilmaan Oromoo Wayyaanee daran hidhaa, ajjeesa, saamaa fi qe’ee isaa irraa buqqisaa jira. Uummatni keenya bara Wayyaanee caaluu ol adamsamaa, dorsisamaa fi jireenya dhiphuu keessa jira. Waraanni Uummata Oromoo irratti labsamee uummanti komandi postii jalatti dhiitamaa jira. Mootummaan Kononeel Abiyi diina Uummata Oromoo keessa isa duraa tahee as bahaa jira. Akka hawwii uummata keenya ilmaan Oromoo aangoo hin qabane. Diqaalota Habashaatu maqaa OPDOn aangoo qabatee Uummata Oromoo dararaa jira. Obbo Leencoon Uummata Oromoo yoo kan dhaabbate tahee maaliif warra Nafxanyootaa wajjin mana cuufatee akka MM Uummata Oromoo fixu gorsuun isaa barbaachisa?
Dr. Biraanii Naggaa dedeebisee kan politikaa keessa akka seenu isa godhee yaadoo gaaffii Uummatni Oromoo kaasaa jiru akka tahe dubbata. Dhiyeenya kana wali gahii Washington D. C. irratti gaaffii isaa dhiyaateef yaroo deebisu yaadni koo fi yaadni Muumcha Ministeera tokko waan taheef isa gargaaruu malee isaa dura dhaabbachuu hin danda’u jedhe deebise. Kononeel Abiyi waa’ee Minilki faarsuu fi haaromsuun ijoolleen Oromoo akka Miniliki jaalattu gochaa jira jedhee faarsaas ture. Jechi Dr. Biranuu Naggaa kun ilmaan Oromoof arba.
Waan baayyee nama ajaa’ibu ijaarsi ABO waraana hin qabu waan jedheef WBOn abbaa hin qabu. Kanaafuu mootummaan akka humna seeraa ala jiru tahuu isaa hubatee tarkaanfii irratti fudhachuu akka qabu dubbatee jira. Jecha kana tahe jedhee akka dabsee dhiyyeesse hubatamuu qaba. Yaadnii fi dhamaatiin isaa kun waraana mootummaan itti jiru seera qabeessa fakkeessuuf. Soba addi waan tahee yaadni isaa kun kan ballaalefatu utuu hin sagalee guddaan kan abaaramuu qabu dha. Hoogganni ABO WBOn hin jiru hin jenne. Ajaja WBO Abbootii Gadaa fi Uummata Oromoof ifatti labsee kenne. Akka isaa balbala cufatee dhoksaattiin hin goone. Shira inni warra Nafxanyoota wajjin ABO fi WBO balleessuuf xaxaa turetu rakkina keessa akka nu gashee Uummatni Oromoo bareechee hubachuu qaba.
Qaaniin biraa OPDOn namoota Oromoo hin taane funaantee “Shanee” irratti Kibba Oromiyaa keessatti hiriira baste jedhama. Ijaarsi Shanee jedhamu hin jiru. Shaneen caasaa ijaarsaa ti. OPDOn kana illee hin beektu. Caasaa Shanee kan qabu ABO Shagar ishee bukkee jira. Achumati hiriira bahu dha malee fagoo deemuu hin barbaachisu. Utuu dandeesse OPDon uummata Oromoo wal itti diritee wal nyaachisaa jidduu jirti. Yaa OPDO guyyaan kee gabaabtee jira. Baayyee hin dhama’iin. Sobaan kana caalaa jirchuu hin dandeessan.
Gammadaa OPDO fi gargaartonni ishee! WBOn hin facaane! WBOn hin tasmaane! WBOn hin badne! Shirri keessan ni fashalee. WBOn hin lalise! WBOn ni dagaage! Oromiyaa guutuu keessatti wal qabatee barrgaage! Kan bakka bu’an walaalle haadha Siiqqee fi Abbootii Gadaa OPDOn tareesitee WBO balleessuuf shira xaxxe qofa. Uummatni Oromoo har’as WBO ni jaalata. Ofitti aansee ammata. Akka agartuu ija isaa kununsifata. Diinni Uummata Oromoo hundi garaa haa kutatu. Si achi lamuu Uummatni Oromoo eenynuun dhiitamee hin bulu. ABN Walloo Dasee keessatti yarroo MM afuura kuutaa jiru Liyuu Haayiliin Amhaaraa saboontota Walloo mana hidhaatti guree gidiraa agrsiisaa jira. Yoo dhugaa fi dimookraasiin biya sana keessa jiraatee maaliif sabni tokko keessatuu kan Oromoo biyya isaa keessa jiraachuuf makaraa arga? Muuchi Ministeeraa kun kan Uummata Amhaaraa qofa waan taheef kan nu baasu irree tokkoon Qaboo Bilisummaa fininsuu qofa!
Shira Xaxuun Dhugaa dhokasuuf Yaaluun Dhugaa Dhabamsiisu Hin Danda’u! Damee Boruu: Amajjii 31, 2020 Dhugaa…
ABO: 'Gaaddisni Hoggansa Paartilee Oromoo rakkoo mudataa jiru hiikaa hin jiru'
ABO: 'Gaaddisni Hoggansa Paartilee Oromoo rakkoo mudataa jiru hiikaa hin jiru' (BBC Afaan Oromoo) --…
KIJIBNI TUULAMU DHUGAA FAKKAATA MALEE DHUGAA TA’UU HIN DANDA’U.
KIJIBNI TUULAMU DHUGAA FAKKAATA MALEE DHUGAA TA’UU HIN DANDA’U. Qixxeessaa Lammii | Adoolessa 29, 2018…
Jogir Abasena says:
Obboo Lencoon marraa Lamaa,sadi
1.Tarsimoo dogogoraatiin waraanni ABO kambiitti gale harka dinaatiin aka dhumu.
2. Gegesummaa saaniirratti qabsoo qancarsuun bakka adda addaattii aka gargar bittina’an fudhatama qaban fayyadamuun moraa qabsoo Oromoo onssuuf yaalanilee ofumaaf kophaattii hafanI
3.Hardhamoo debi’anii yeroo ulfina mangudumaatiin dhaaba kanaaf tumsuqabanitti,haqa isaa awaaluuf gola dinaakesa dhaabachun duba dhaabatani shukkaan waraanaa jiru.
Ta’us qabsoon Oromoo daraare garbaabe saffisaan gara galma ga’usaattii tarkaanfataa jira.
Baga harmeen Oromoo isa duwwaa hinda’in. “Na arga Na arga jenaan mucaan tumttu ija babaafte.” jedha Oromoon . Kanaaf qabsoo finiinsuu duwwaadha.